बझाङमा खोलाले बगाउँदा बालिकाको ज्यान गयो – Annapurna Daily
बझाङमा खोलाले बगाउँदा बालिकाको ज्यान गयो
On May 22, 2021 63
बझाङ – बझाङमा खोलाले बगाउँदा एक बालिकाको ज्यान गएको छ ।
बाउली खोलाले बगाउँदा सुर्मा गाँउपालिका वडा नम्बर १ की १३ वर्षीया कविता बोहराको ज्यान गएको हो । यार्सा सङ्कलन गरेर घर फर्कने क्रममा बोहोरा चिप्लिएर खोलामा खसेकी प्रहरीले जनाएको छ । हिजो दिउँसो खोलामा खसेकी बोहराको बिहान धौलीपैरीमा शव भेटिएको हो ।
केही दिन अघि परेको वर्षाका कारण हिमपात भएपछि उनीहरु घर फर्किएका थिए ।
यो पनि पढ्नुस : धनियाँका अपत्यारिला फाइदा, यस्ता राेगहरूकाे पनि अचुक औषधि जानिराखाैँ !
यसै क्रममा धनियाँको पातमा किरा/जीवाणुकाे संख्या बढी हुने र त्यस्ता पात राम्रोसँग नपखाली वा नपकाएर खाएमा स्वास्थ्यका लागि निक्कै खतरनाक हुन सक्ने चिकित्सकहरुले बताएका छन् । एजेन्सीको सहयोगमा
यो पनि पढ्नुस : निमोनियाको यस्ताे लक्षण देखिए तुरुन्त डाक्टरको सम्पर्कमा जानुहाेस् नत्र आइपर्न सक्छ ठूलाे समस्या
निमोनिया खासगरी ५ वर्ष भन्दा तल र ६० वर्ष भन्दा माथिका उमेर समुहलाई हुने सम्भावना बढि हुन्छ । किनकी उनीहरुको प्रतिरक्षा प्रणाली अलि कमजोर हुने गर्दछ ।
निमोनिया हुँदा फ्लु जस्तो लक्षण महसुस हुन्छ । यो लक्षण विस्तारै–विस्तारै तिव्ररुपमा विकास हुन्छ ।
निमोनियाको मुख्य कारण खोकी हो ।
रोगीले कमजोर र थकाई महसुस गर्छन् ।
बिरामीलाई ज्वरो आउनुको साथै पसिना आएर काम्ने पनि गर्छन् ।
बिरामीलाई सास लिन कठिनाई भएर तिव्ररुपमा सास लिन थाल्छन् ।
छातीमा दुखाई हुन्छ ।
बेचैनी महसुस हुन्छ ।
भोक कम लाग्छ ।
निमोनिया हुँदा साना बच्चामा देखिने लक्षणहरु,
साना बच्चाहरुलाई ज्वरोसँगै पसीना आएर काम्न थाल्छन् ।
बच्चाहरु जब धेरै खोक्न थाल्छन् ।
हेर्दै अस्वस्थ देखिन्छन् ।
खाना खान मान्दैनन्, भोकै महसुस हुँदैन ।
निमोनिया बैक्टीरियल, भाइरल, माइक्रोप्लाज्मा, एस्पिरेशन, फंगलजस्ता प्रकार हुन्छन् ।
के कारणले हुन्छ निमोनिया ?
भाइरस, ब्याक्टेरिया, फंगस वा अन्य जीवबाट निमोनिया हुन्छ ।
केही प्रकारका जीवाणुबाट र धेरैजसो निमोनिया गर्ने जीवलाई पत्ता लगाउन सकिदैन ।
निमोनिया भएपछि कुन अवस्थामा डाक्टरको सम्पर्कमा जाने
बिरामीको उमेर ६० भन्दा माथि भएमा
बिरामाीको बि.पी स्टोलिक १४० देखि डेस्टोलिक ९० भन्दा कम भएमा
बिरामीको सास छिटो चलेमा
सास फेर्न सहायताको आवश्यकता परेमा
रोगीको तापक्रम सामान्य भन्दा कम भएमा
बिरामीको ह्दयको गति ५० भन्दा तल र १०० भन्दा माथि भएमा । एजेन्सीको सहयोगमा